Rugta ganacsiga Puntland oo samaysay dallada Xabkaha, Faleenka iyo Beeraha [Codad+Sawiro] • Horseed Media
You are here: Home / Business / Local businesses / Rugta ganacsiga Puntland oo samaysay dallada Xabkaha, Faleenka iyo Beeraha [Codad+Sawiro]
Posted: Moha Salat - March 10, 2012
Rugta ganacsiga iyo wershedaha ee Puntland ayaa dhistay dallad ay ku bahaysan yihiin ganacsatada Xabkaha, Faleenka iyo Beeraha ee Puntland.
Dalladan oo ay ku bahoobeen in ka badan 7-shirkadood oo kuwa Xabkaha, Faleenka, iyo Beeraha ka shaqeeya ah ayaa maanta lagu dhisay hoolka shirarka ee xarunta rugta ganacsiga ee Boosaaso.
Munaasabadaas oo ahayd mid si heer sare ah loo soo qaabeeyey ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda rugta iyo ganacsato badan, waxaana ugu horeyn ka hadlay xoghayaha guud ee rugta ganacsiga iyo wershedaha ee Puntland Axmed Ciise Maxamuud (Feyte).
Wuxuuna sheegay in dalladan cusubi ay noqonayso tii 2-aad ee ay rugta ganacsigu samayso, islamarkaana ay qayb ka tahay lix dalladood oo kuwa ganacsiga ah, kuwaasoo ay rugtu qorsheysey sidii loo dhisi lahaa, ujeedada looga gol leeyahayna ay tahay in la helo dallado ganacsi oo si fiican u shaqeeya kana qayb qaata koboca dhaqaale ee dalka.
Dhegeyso codka xoghayaha guud ee Rugta ganacsiga Puntland
Gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo wershedaha ee Puntland Maxamuud Xayir Ibraahim ayaa isna goobta ka hadlay wuxuuna ku dheeraaday muhiimadda ay dalladani u leedahay ganacsatada gobolka iyo guud ahaan deegaanada Puntland, isagoo xusay inay horseedeyso in khayraadka dalka suuqyo caalami ah loo helo.
Dhegeyso codka Gudoomiyaha Rugta
Maxamed Caydiid Jaamac oo isna ah gudoomiye ku xigeenka 2-aad ee rugta ayaa sheegay in dallada ay ku bahoobeen ganacsatada Xabkaha, Faleenka iyo Beeraha ee ay rugta ganacsigu maanta dhistay ay noqoneyso mid abuurta is fahan ka dhex dhasha ganacsatada kaasoo keenaya horumar dhanka ganacsiga ah iyo koboc dhaqaale oo xooggan.
Dhegeyso codka Gudoomiye ku xigeenka 2-aad ee Rugta
Maxamed Samatar Yuusuf oo isaga loo doortay gudoomiyaha dallada ganacsatada Xabkaha, Faleenka, iyo Beeraha ee Puntland ayaa ugu danbeyntii hadalka qaatay wuxuuna u mahad celiey rugta ganacsiga isagoo tilmaamay inay mar walba u heelan tahay sidii ay ganacsatada u garab istaagi lahayd. Gudoomiye Samatar waxa kale oo uu sheegay in dalladani ay tahay mid wax badan ka tari doonta sidii ay ganacsigooda u horumarin lahaayeen.
Dhegeyso codka gudoomiyaha Dallada X.F. iyo Beeraha
Dalladan oo ay ku bahoobeen 7 shirkadood oo kuwa Xabkaha, Faleenka iyo Beeraha isugu jira ayaa noqonaysa tii 2-aad ee ay rugta ganacsiga ee Puntland sanadkan gudihiisa dhisto, horayna waxay u dhistay Dallada wershedaha, waxaana sida ay maamulka rugtu shegeen uu qorshuhu yahay in la dhiso 6-dalladood oo kuwa ganacsiga ah si awoodda ganacsatada la isugu geeyo loona sameeyo ganacsi firfircoon iyo koboc dhaqaale oo muuqda.